🥇 ▷ Samsung waxay kordhineysaa tirada unugyada loo yaqaan 'Galaxy Fold' 'iyadoo la tixraacayo baahida jirta awgeed ✅
Samsung waxay kordhineysaa tirada unugyada loo yaqaan ‘Galaxy Fold’ ‘iyadoo la tixraacayo baahida jirta awgeed
Wuxuu galaa Galaxy haa haa hada waa halkaan, iyo mar kale Samsung waxay muujineysaa cidda ka mas’uulka ah bilaabidda alaabada tikniyoolajiyada leh hal-abuurka ugu weyn. Taasna waa sababta oo ah xitaa hadda waxay ku qasbanaatay inay kordhiso tirada halbeegyada sarreynta baahida jirta awgeed.
Hal taleefan kaas oo ku biiraya Huawei inuu tuso jidka taasi waa in la raaco sanadaha soo socda. Waana taas iyada oo leh naqshada qaar ka mid ah mobilada mobiladaha ee ugu caadisan, taas oo umuuqata inay ku dhamaatay taxanaha Galaxy S iyo Note Iyada oo shaashadda oo dhan iyo dabar go’an, awood u leh inay geyso taleefankeena mobilada si loogu rogo kiniin, sida ugu dhakhsaha badan Qiimaha wuu dhacayaa, wuxuu suuqa u noqon doonaa qarax.
Wareegii koowaad ee Boos celinta horudhaca ah ee Galaxy Fod ayaa lagu iibiyay sifiican Koonfurta Kuuriya. Kuwa seegay daaqada boos celinta waxay hadda heli doonaan fursad labaad oo ay ugu riyaaqaan taleefanka oo labanlaabmay laga bilaabo Sebtember 18.
Sababtaas awgeed ayaa ah Samsung waxay kordhineysaa tirada unugyada markii la hubinayo baahida sare ee Galaxy Fold ee dalkiisa. Marka kuwa iyagu berrito sugaya inay iibsadaan mid, ayaa helaya fursadda ugu fiican.
Hadana haddii aan ognahay in qaar iibsadayaal ah ay hadda iibinayaan wuu laalaadayaa labanlaabkeed, waxaan si fiican u fahmi karnaa soo dhaweynta weyn ee aad helayso si sumadda South Korea ay dhigto baytariyada una siiso macaamiisheeda waxa ay raadinayaan.
Ilaa iyo inta la ogyahay, Samsung wuxuu lahaa 3,000 cutub dukaamada Samsung iyo ku dhawaad ​​1,000 unug oo loogu talagalay saddexda hawl-wadeen ee ugu waaweyn dalka. Websaydhka Samsung ayaa iibiyay dhammaan Foosto 10 daqiiqo gudahood wax badana kuma qaadanin in lagu iibiyo qadka ka maqan internetka eek u yaal SK Telecom, KT iyo LG Uplus.
Rajada Samsung ayaa ah inay iibiso 1 milyan oo unug adduunka ee ‘Galaxy Fold’ oo ah dufcaddii labaad ee horay u-haynta. Inta u dhaxaysa 20,000 iyo 30,000 oo ka mid ah unugyadaas ayaa loo qaybin doonaa Kuuriyada Koonfureed.